Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Kusoo Kordhay Ku Dhawaaqista Golaha Wasiirada Cusub | Nabadqaad Online
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Kusoo Kordhay Ku Dhawaaqista Golaha Wasiirada Cusub
Warar hoose oo aan ka helnay madaxtooyada somaliya ayaa waxaa ay shegayaan in lagu dhawaaqi doono wasiirada cusub oo lashegayo in muran badan uu kajiro sida loo qeybsanayo wasaradaha ugu muhiim san dalka sida wasaarada maaliyada wasarada gashaandhiga wasarada arimaha guda iyo wasarada arimaha dibada.
ilo wareedyo kudhaw madaxweyne farmaajo iyo reysulwasare kheyre ayaa waxaa ay kusoo waramayaan in hada ay ku jiraan qeybtii ugu danbeysay ee magacabista gobalaha wasirada xukumada cusub ee reysulwasare xasan cali kheyre.
tirada wasiirada cusub ayaa lashegay in ay garayaan 20 wasiir tasoo kadhigay in shanta beel ee somalida ay heleyso beeshiba 4 wasiir oo mid kamid ah uu muhiim yahay inkastoo caqabado ay jiri karaan
afarta beel ee kala ah hawiye daarood digil mirifle iyo beesha dir ayaa ah kuwa hada kuloo lamaya wasarada muhiimka ah ee aan soo sheegnay.
qaaabka ugu macquulsan ee hada soo kasoo baxayo ayaa waxaa ay shegayaan in qaabkan loo qeyb saday wasirada cusub gaar ahan wasarada muhiimka ah.
1-Beesha daarood: Wasiirka Maaliyadda
2-Beesha digil mirifle: Wasiirka Difaaca
3- Beesha dir: Wasiirka Arrimaha Dibadda
4- Beesha hawiye: Wasiirka Arrimaha Gudaha
5- Beesha hawiye: Wasiirka Amniga
balse lama oga sida ay wax noqon doonaan madama waqti kasta ay wax iska badali karaan waxkasta oo markaas socday ay dib markala iska badali karaan inkastoo lafilayo in ay wasiirada cusub inta badan ka imaan doonaan banaanka xildhibanada